Faallo: Maxaad Ku Salaysay Mucaaradnimadaada,?!!!!!!! – Hornafrik Media Network
Marka aad maqasho wax baa la mucaaradaa ee aadan garanayn waxa ay tahay mucaaradnino , waxaa kaa qarinaya inaad qirto ama afka ka sheegto wixii san ee la gaaray dhawr qodob:
5) Jahwareer nafeed oo ku haya.
Marka uu xilka qabto mid aan kugu qabiil ahayni, horumarka la sheegayo adiga kuguma socdo , ee shaqsiga uun baa kuu bidhaamaya.
Nin jeclaysi, eex, fudayd, ogaal li’i , wacyi la’aan waa dhawr cudur oo maanta soomaalida haya.
Marka aad iska indhatirto horumarka socda ee 80% ka ah , ee uu kuu muuqdo 20% khalad ahi , waxaad tahay qof gees ka raran. Nimcada Ilaahay ku siiyay in lagu shukriyo waa waajib, khaladka jira in la sheegaana waa waajib : balse waxaa habboon khaladka in loo sheego si loo saxo ee aan loo sheegin si qof gaara loogu xumeeyo.
Waxaan hubaa madaxda maanta talada haysa iyo kuwii ka horreeyayba inay dhibaato aad u xooggan la kulmeen. Marka aad walaalkaa dhurwaa u dhiibto ee aad ku tiraahdo sii hay meel ban ka soo noqonayaaye , dibna aadan ugu soo noqon , ha ku eedin walaalka maxaad dhurwaaga u sii daysay, waayo kalgii maanu hayn karin ee kaalmadaada ayuu u baahnaa
“GACMO WADAJIR BAY GOYNAYAAN GEED ADAYG BADANE”
Hal nin oo ama siyaasiya ama hoggaamiye ahi waxba kaligii ma qaban karo , haddii dadka uu madaxda u yahay ay kala yihiin sida tan:
1) Mid reernimo ku nacaya
2) Mid maxaad reerkayaga u naas-nuujin waysay ku nacaya
3) Mid maxaad lacag ii siin waysay ku nacaya iyo qaar kaloo badan marka laga reebo in yaroo wanaagsan. Bulshada soomaaliyeed haddaan nahay ma nihin dad u bisil dhaqan-siyaasadeed fufan , ee hagid iyo hannaan dowladnimo lagu gaari karo.
Ciise Xaashi Xayle
Madaxwayne Farmaajo Oo U Ambabaxay Sucuudiga.